घटराज भट्टराई - Ghat Raj Bhattarai
घटराज भट्टराईका बुबा केहीनकेही गरिरहूँ भन्ने धारणाका थिए । उनी पण्डित र कवि पनि थिए । पं.जयप्रसाद भट्टर्राईको प्रथम विवाह आयोध्याकुमारीसँग भएको थियो । अयोध्याकुमारीसँगको दाम्पत्य जीवन असफल भएपछि उनले बालकुमारीसँग विवाह गरेका थिए । यिनै जयबालबाट तीन भाइछोरा घटराज, प्रयागराज र केशवराज तथा छ बहिनी छोरी विन्दा, बदम, गोमा, मह, खड्ग र देवकी जन्मेका थिए ।
नेपाली भाषासाहित्यमा घटराज भट्टराईको लगानीले ठूलो रिक्तताको पर्ूर्ति भएको मानिन्छ । नेपाली साहित्यमा एउटा पुस्तक लेख्नेदेखि नेपाली साहित्यका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसम्मको चिना बनाएर उनीहरूको गाथाको वर्ण्र्ाागर्ने उनी एउटा सिङ्गो संस्था थिए । विनाभेदभाव उनी सबै साहित्यकारको. बराबरी लेखाजोखा राख्ने गर्थे । त्यति मात्र होइन उनी नेपाली भाषासाहित्यमा एउटा आधिकारिक व्यक्तित्व मानिन्थे ।
भट्टराई नेपाली भाषासाहित्यमा समर्पित भएर नै थला परे । उनलाई उपचार्रार्थ थुप्रै चिकित्सककोमा पुर्‍याइयो । अन्ततः उनलाई सुप्रसिद्ध नसा विशेषज्ञ डा. वसन्त पन्तले परीक्षण गरे । अनि डा. पन्तले भट्टर्राईका मस्तिष्कामा चारौं ग्रेडको क्यान्सर भएको बेहोराको निक्र्यौल निकाले । अन्ततः रोग निको भएन र उनी २०६३ साल साउन २२ गते स्वर्गीय भए ।